Azonao atao izao ny misintona ny afisy Madrid rehetra manomboka amin'ny 2016 ka hatramin'ny 2019 | Famoronana an-tserasera
Ny marina izay ny ekipa mpamorona ao ambadiky ny afisy hitanay tany Madrid ireo 3 taona lasa izay dia niasa. Raha ny marina dia natolotry ny filan-kevitry ny tanànan'i Madrid ho azon'ny rehetra izy ireo mba hahafahanay misintona sy manonta azy ireo tsy andoavam-bola amin'ny famahana farany.
Eny, mikarakara foana tsy hampiasa azy ireo amin'ny tanjona ara-barotrasatria manana zon'ny mpamorona izy ireo. Ny azonao atao dia ny manana ny sasany amin'ireo afisy hitanay nandritra ny fotoana nitondran'ny Ben'ny tanàna Manuela Carmena ary misy ny hetsika toy ny karnavaly, fahavaratra any an-tanàna, fety monisipaly, taom-baovao sinoa ary maro hafa.
Ny afisy sasany tena nahomby tamin'ny media sosialy ary izany amin'ny alàlan'ny trano fitehirizana afisy monisipalyNa iza na iza dia afaka misintona azy ireo amin'ny solosainy ary manonta azy ireo.
Tadidio fa raha hanaparitaka azy ireo indray ianao dia tsy maintsy omenao azy tsara, fa tsy manova azy na mampiasa azy amin'ny tanjona ara-barotra. Izy dia talen'ny famoronana ao amin'ny Conseil Madrid City, Nacho Padilla, ilay nanomboka ity hetsika ity izay ahatsiarovanao ny tantaran'ny tanàna tao anatin'izay 3 taona mahery izay.
Manana isika afisy an'i Cristina Daura sy Nuria Úrculo, hampiroborobo ny Veranos de la Villa 2019; Afisy ao amin'ny Yinsen Studio fahatsiarovana ny fikomiana iraisam-pirenena momba ny feminisma tamin'ny 8 martsa; ary ny hafa toa an'i Aperitif Studio ho an'ny Pride 2018.
Fifanarahana tsy azo nolavina raha te-hanome fanomezana be dia be ianao amin'ny fanontana azy ary apetaho amin'ny toerana tsara na handravahana ny tranonao miaraka amina lohahevitra an-tsary izay lehibe kokoa noho ny zava-dehibe amin'ny ambaratonga rehetra.
Ny marina dia misy karazany maro ao amin'ity tahiry ity napetraky ny Filan-kevitry ny tanànan'i Madrid mba hampiseho ny hevitra lehibe narotsaka avy amin'ny endrika hametrahana ireo zava-nitranga manan-danja ao amin'ny tanàna toa an'i Madrid. Ho hitantsika eo raha hiasa mafy ity manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny fiadidiana ny tanànan'i Madrid dia mamela ny paositra rehetra nandravaka ny tanàna hatramin'ny 2016
Adobe dia manambara ny anaran'ilay nantsoiny hoe tetikasa Gemini: Adobe Fresco
Milkshake hanana tranokala afaka minitra ary vonona ny amin'ny piraofilinao Instagram